Xildhibaan Idiris “Kenya naguma qasbi karto in aan qol mugdi ah kula hadalno” – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay go’aankii ay shalay ganacsatada qaadka ku joojiyeen qaadkii ugu imaan lahaa dalka Kenya, kadib markii ay cirka isku shareertay Xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiri oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in Ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka muujiyeen u hiilinta dalkooda, talaabo mudan in lagu dhiira geliyana ay qaateen sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa war aad loogu farxo ah in ganacsatad Soomaaliyeed qaataan go’aan ay ku difaacayaan dhulkooda, ayna joojiyaan qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya, kuna soo beegaan waqti munaasab ah”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xasan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
“Dowladda Kenya markii hore waxaa lagu qanciyay hadal waafi ah balse waarrkii kale ee ay ka soo daba-tuurtay waxay ahaayeen wax dhaafsiisan nidaamka diblomaasiyadeed waana kaas mirihi ay ka dhaxashay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Ganey oo Golaha Shacabka katirsan.
Maxamed Xasan Idiris ayaa sheegay in hadalkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Kenya in uu ahaa mid meel ka dhac ku ah Qaranimada iyo Madax-banaanida Soomaaliya loona baahan yahay in Kenya ay raacdo nidaamka caalamiga ah ee Diblomaasiyadda.
“Hadalkii ka soo baxay waxa uu xad gudub ku ahaa Gobanimada iyo Madax-banaanida Soomaaliya, Kenya naguma qasbi karto inaa ku wada-hadalno qol mugdi ah” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Idiris oo Baarlamaanka Soomaaliya katirsan.
Waxaa jira Xubno badan oo xilal ka haaya Soomaaliya oo arintaan aad uga hadlay, Shacabka Soomaaliya iyo dhamaan mas’uuliyiinta xilalka haaya iyo kuwa kale aan hada xil heynin ayaa ka siman taageerada dowladda Soomaaliya ee khilaafka Kenya kala dhaxeeyo.